दाङ अब खेलकूदको हव | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / दाङ अब खेलकूदको हव
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता October 31, 2018	0 255 Views
जिल्ला खेदकूद विकास समिति दाङका अध्यक्ष
आगामी मंसिरमा आयो जना गरिएको आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिता भौ तिक संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण माघमा सरे को छ । माघ २५ दे खि फागुनको २ गते सम्म सञ्चालन हुने प्रतियो गिता बाके मा उद्घाटन भई दाङमा समापन गरिने छ । दाङमा विभिन्न सातवटा खे लमा प्रतिस् पर्धा गराइने छ । दाङका पालिकाहरुलाई स्पो र्टस् सिटी बनाउने अभियान चलिरहे का बे ला दाङको खे लकूदको अवस्था, आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिताको तयारी, भौ तिक संरचना निर्माणका विषयमा युगबो धकर्मी जे एन सागरले दाङ जिल्ला खे लकूद विकास समितिका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर डागीसग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
खे लकूद गतिविधि शून्य जस् तै दे खिन्छ, कि के ही भइरहे का छन् ?
राष्ट्रिय खे लकूद परिषदबाट खासै नया कुनै गे म प्लान आएको छै न । तर दाङमा स् थानीय पालिकामार्फत वडास् तरसम्म विभिन्न खे लकूद प्रतियो गिता भइरहे का छन् । त्यस्तै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुले पनि प्रतियो गिता गरिरहे का छन् । हिजो भन्दा आज खे ल गतिविधि बढिरहे को दे खिन्छ । त्यस् तै भौ तिक पूर्वाधार निर्माणका काम पनि उत्तिकै भइरहे का छन् । हामीहरु जिल्ला खे लकूद विकास समितिको ने तृत्व गरे र आइसके पछि दाङमा तीनवटा यो जना अघि सारे का थियौ ं । खे लाडीको विकास, नियमित प्रशिक्षण, भौ तिक पूर्वाधार निर्माण र सो ही अनुसार भौ तिक पूर्वाधार निर्माणमा हामी लागे का छौ ं । चाहे त्यो लमहीको क्रिके ट मै दान हो स्, चाहे त्यो घो राहीमा निर्माणाधीन बास् के ट बल को र्ट हो स् । चाहे त्यो बे लझुण्डीमा पनेर् रंगशाला निर्माण हो स् । चाहे तुलसीपुरमै निर्माणाधीन मल्टिप्रपो ज कभर्ड हल किन नहो स्, विभिन्न विद्यालय र सार्वजनिक स् थानहरुमा खे लकूद मै दानहरु निर्माण गदैर् आएका छौ ं । हामीले त एक पालिका एक कभर्ड हल र एक वडा एक खे लमै दान निर्माण गर्न स् थानीय तहरुलाई प्रस्तावसमे त पे श गरिसके का छौ ं ।
त्यस अनुसार दाङका दशवटै पालिकामा कम्तिमा ५० लाखको दरले प्रदे श सरकारले बजे टसमे त पठाइसके को छ । खासगरी आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूदलाई मध्यनजर गदैर् लमहीमा क्रिके ट मै दान, घो राहीमा बास्के ट बल को र्ट, बे लझुण्डीमा रंगशाला र तुलसीपुरमा मल्टिप्रपो ज कभर्ड हल निर्माणमा लागे का छौ ं ।
आठौ ंको लागि प्रशिक्षण हुदैन ?
हुन्छ । शुरु भइसके को छ । जिल्लामा रहे का सबै प्रशिक्षकहरुले आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिता लक्षित प्रशिक्षण थालिसक्नु भएको छ । हामीले अनुगमन पनि गरिरहे का छौ ं । त्यस्तै स्वयंसे वक प्रशिक्षकज्यूहरुले पनि यस्ता प्रशिक्षण चलाइरहनु भएको छ । मलाई लाग्छ आठौ ंमा हाम्रो दाङ जिल्लाले राम्रो स् थान प्राप्त गनेर् छ भन्ने आशाका साथ तयारी पनि थाले का छौ ं ।
दाङले भौ तिक पूर्वाधार तयारी नगर्दा मंसिरमा हुने प्रतियो गिता माघमा सार्नुप¥यो नि ?
दाङले मात्रै भौ तिक पूर्वाधार तयारी नगरे का कारणले प्रतियो गिता नै सार्नुपरे को भन्ने हो इन । समग्र आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिता सञ्चालन गनेर् भनिएको छ । त्यहँका संरचना समयमा नबन्दा प्रतियो गिता के ही पर सार्नु परे को हो  । जस् तो ने पालगञ्जमा प्रतियो गिताको उद्घाटन गनेर् र दाङमा समापन गनेर् यो जना छ । सो ही अनुसारको भौ तिक पूर्वाधार तयारी नहु“दा समस् या परे को हो  । दाङकै कुरा गनेर् हो भने गत असार ७ गते रंगशाला निर्माणको टे ण्डर सम्झौ ता भएको छ । अहिले पनि हामीले त्यो समयमा सम्झौ ता भएअनुसार माघमा भौ तिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गनेर् र प्रतियो गिता सञ्चालन गनेर् तर्फ हामी लागे का छौ ं । यो भन्दा ठूलो , छिटो छरितो तयारी अरु के हुनसक्छ र ?
रंगशाला निर्माणस्थलमा माटो थुपानेर् काम बाहे क के ही दे खिदै न त ?
यसो हे र्दा तपाइ“ले भने जस् तो दे खिन्छ । बे लझुण्डीमा त माटो मात्रै थुपारिएको छ । के ही भएन भन्ने आममान्छे हरुलाई लाग्नु स् वाभाविक नै हो  । सम्झौ ता भएकै दिन असार ७ लाई कामको शुरुवात मान्ने हो भने माघमा आठौ ंका लागि पूर्वाधार तयार गनेर् कुरा सानो तिनो मे हनतले ह“ुदै न । तर हामी लागे का छौ ं । जस् तो रंगशालाकै लागि त्यहा“ लाग्ने सामग्रीहरु ठे के दारले चीनमा अडर गरिसके को अवस्था छ । त्यहा ती सामान निर्माण भइरहे का छन् । निर्माण भइसके पछि ती सामग्री दाङ ल्याउन दुईमहिना लाग्छ । यहा“ ल्याइसके पछि फिटिङको काम गर्नुपर्छ झण्डै एकमहिना थप लाग्ने दे खिन्छ । यसरी माघ महिना काम सकिन्छ र हामीले आठौ ं प्रतियो गिता सञ्चालन गर्न सक्छौ ं । यदि यी भौ तिक संरचना निर्माण भए हरे क महिना दाङमा विभिन्न खे लका राष्ट्रिय प्रतियो गिता हुने छन् । यसले दाङलाई खे लकूदको हव बनाउने छ । लमहीलाई क्रिके टको क्षे त्र, घो राहीलाई बास् के ट बल, बे लझुण्डी फुटवल हुनसक्छ र तुलसीपुरलाई विभिन्न इन्डो र प्रतियो गिता खे ल्ने क्षे त्रका रुपमा विकास गर्न सकिने छ । घो राहीको गुलरियामा उपमहानगरपालिकाकै लगानीमा ठूलो क्रिके ट मै दान बन्दै छ । यसपालि जिल्ला खे लकूद विकास समितिले पनि लगानी गदैर् छ, हामीले बजे टिङ गदैर् छौ ं । तुलसीपुरमा पनि विभिन्न ठाउमा खे ल सञ्चालन गर्न सुविधासम्पन्न नभए पनि खे ल्न मिल्ने भौ तिक संरचनाको विकास आठांै खे लकूद प्रतियो गिता अघि नै बनाउदै छौ ं ।
सामग्री निर्माण, ढुवानी र फिटिङको प्रक्रिया हे र्दा माघमा पनि तयारी हो लाजस्तो दे खिएन नि ?
त्यसो ह“ुदै न । माघसम्म काम सकिन्छ । प्रतियो गिता हुन्छ । यसपालि लामो वर्षातका कारणले काममा के ही कठिनाइ भएको हो  । जसका कारणले मंसिरमै हुने प्रतियो गिता माघमा सारिएको हो  । अब त्यो भन्दा पर सार्न पाइ“दै न । सार्न हामी पनि मान्दै नौ ं । समयमै भौ तिक पूर्वाधार सम्पन्न हुनुपर्छ । यस विषयमा खे लकूद मन्त्री, राखे पका सदस् य सचिव पनि गम्भीर हुनुहुन्छ । क्षे त्र र स् वयं दाङ पनि समयमै प्रतियो गिता सम्पन्न गर्न क्रियाशील भएर लागे को छ । भर्खरै मन्त्रालयबाट एउटा टो लीले दाङको अनुगमन गरे को छ । कार्य प्रगति हे र्दा हौ सला प्रदान भएको बताउनुभएको छ । उहा“हरुको भनाइले हामीलाई ऊर्जावान बनाएको छ । त्यसै ले समयमै प्रतियो गिता सञ्चालन हुने छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौ ं ।
बन्छ, हुन्छ भन्ने अन्तिममा हतार भयो भने र झारा टानेर् काम गरे र प्रतियो गिता चलाउने त हुदै न ?
त्यस् तो हामीले कुनै पनि हालतमा हुन दिदै नौ ं । म खे ल क्षे त्रबाटै ने तृत्वमा आएको हु“ । मलाई थाहा छ दाङको खे लक्षे त्र के कारणले पछि परे को हो भन्ने  । त्यसकारणले यसपालि आएको अवसरलाई कुनै पनि हालतमा छुट्न दिने छै नौ ं । कुनै पनि हालतले विनियो जित रकम फ्रिज हुन दिदै नौ ं र त्यो बजे टकै परिचालन गरे र समयमै संरचना निर्माण गर्न हामी लाग्ने छौ ं । हाम्रा व्यक्तिगत कामलाई था“ती राखे र, रातलाई रात र दिनलाई दिन नभने र काममा खटिने छौ ं ।
आठौ ं लक्षित भौ तिक संरचना के हुन् दाङमा ?
सम्पन्न के ही भएका छै नन् । सबै निर्माणाधीन अवस् थामै छन् । समयमै सबै सम्पन्न हुन्छन् । आठौ ं खे ल्नका लागि लमहीको क्रिके ट मै दान, घो राहीको बास् के ट बल को र्ट, बे लझुण्डीको रंगशाला, तुलसीपुरमा मल्टिप्रपो ज कभर्ड हल हुन् । के ही खे लहरु जस् तो व्याड मिन्टन संघ र घो राही नगरविकास समितिले घो राहीमा निर्माण गरे को कभर्ड हलमा के ही खे ल हुने छन् । यसमा १० लाख लगाएर मर्मत गरिएको छ र अझै के ही मर्मत गर्नुपनेर् भए फे रि काम गनेर् छौ ं । अहिले खे ल्न मिल्ने भने को व्याडमिन्टन कार्ट मात्रै हो  । तीन महिनाभित्र सबै भौ तिक संरचना सम्पन्न हुने छन् ।
खे लाडी उत्पादन र प्रो त्साहन कति गर्नुभयो ?
नया“ खे लाडी उत्पादन गर्न हामीले नमुना के ही त्यस् तो गरे का छै नौ ं । राखे पले यो वर्षदे खि अन्तराष्ट्रिय खे ल खे ल्ने खे लाडी र ओ लम्पिएनहरुलाई सम्मान स् वरुप भत्ताको व्यवस् था गरे को छ । थो रै भए पनि आगामी दिनमा त्यसलाई बढाएर लै जाने र खे लाडीहरु निरुत्साहित हुनुपनेर् छै न । पढ्दा जागिर खान सकिन्छ भने जस् तै खे लमा लाग्दा पनि जीविको पार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले ढुक्कस“ग लाग्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । सरकारले बनाएको खे लकूद र खे लाडीस“ग सम्बन्धित कानुनहरु स् थानीय सरकारसम्म पठाउ“दै छ । त्यसबाट खे लाडीलाई थप सहज हुने छ ।
दाङकै दुईजना खे लाडी आर्थिक अभावले मार्सल आर्टस् विश्वकपमा जान नसक्ने भन्ने सुनिदै छ, के ही सहयो ग हुन्छ समितिबाट ?
खे लकूद विकास समिति आफै मा बजे ट हुने संस् था हो इन । के ही भौ तिक संरचनाका लागि रकम आए पनि अतिरिक्त काममा पै सा हु“दै न । तर पनि हामीले विभिन्न संघसंस् था, स् थानीय सरकारस“ग स्रो त जुटाइदिन र स्रो तका लागि पहल गर्न सक्छौ ं ।
राष्ट्रिय महिला क्रिके ट प्रतियो गितामा दाङको तयारी कहा पुग्यो ?
दाङमा सातवटा खे ल हुने भने र पहिलो बै ठकबाटै निर्णय भएको हो  । त्यसमध्ये एउटा महिला क्रिके ट हो  । त्यसको तयारी भइरहे को छ ।
आश गरिएकै क्रिकेटको प्रशिक्षक नहुदा दाङले आशातीत नतिजा पाउला त ?
हो  । क्रिके टमा मात्रै हो इन, धे रै खे लका प्रशिक्षकहरु छै नन् । आठौ ंमा ३५ वटा खे ल समावे श गरिएको छ । त्यसमध्ये बढीमा आठवटा खे लका प्रशिक्षक हामीसग छन् । तसर्थ प्रशिक्षकविना पनि आफूहरुलाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाउन सफल भएको अवस्था छ ।
अन्त्यमा खे ल र खे लाडीको समग्र विकास गर्न के गर्नुहुन्छ ?
खे लाडीको विकासका लागि स् थानीय तहले बजे ट विनियो जन गरिनुपर्छ । खे लाडीको विकास र भौ तिक संरचनाका लागि विनियो जन गर्ने परिपाटीको विकास गरियो भने धे रै माथि उठ्छ दाङको खे लकूद । मे रो र ते रो भन्दा पनि दशवटै पालिकाहरु स“गै बसे र साझा यो जना र बजे ट बनाउन सकियो भने त्यसले कम्तिमा छ महिना प्रशिक्षण दिने वातावरण बन्ने छ । त्यसपछिको समयमा भने दाङका खे लाडीहरुलाई दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय खे लाडीको रुपमा स्थापित गराउन सकिन्छ ।
त्यसको अगुवाइ तपाइहरुले गर्नुहुन्छ ?
हामीले त्यसको अगुवाई गछौर् ं । अहिले आठौ ं राष्ट्रिय प्रतियो गिता सम्पन्न गनेर् तिर हाम्रो ध्यान छ । प्रतियो गितापछि हामी जिल्लाकै गुरुयो जना निर्माण गरे र सबै पालिकालाई दिएर दाङको खे लकूद विकासमा जो ड्ने छौ ं ।
Previous: नयाँ गाउँमा पिउने पानीको माग
Next: माहुरी चरनको पकेट क्षेत्र बन्दै प्युठान